Wasiir shaqadii uu ka eryay Aabihiis | Baydhabo Online
Wasiir shaqadii uu ka eryay Aabihiis
Wasiirka gobolka Uttar Pradesh,oo ah gobolka ugu dadka badan wadanka Hindiya ayaa waxaa xisbigii uu ka tirsanaa ka eryay Aabihiis.
Wasiirka oo lagu magacaabo Akhilesh Yadav ayaa waxaa shaqada ka eryey “si loo badbaadiyo xisbiga” Samajwadi Party (SP) hogaamiye Mulayam Singh Yadavs oo ah Aabihiis sida ay sheegtay warbaahinta Hindiya.
Talaabaada Mulayam ayaa ka dambeysay ka dib markii wiilkiisu uu baahiyey magacyada 235 musharaxiinta doorashooyinka soo socda, inkastoo xisbigu goor horaba uu ku dhawaaqay xubnihiisa. Liiskaas ayaa waxaa ka mid ahaa taageerayaasha Akhilesh, waxaana uu ka saaray xubno daacad u ah Aabihiis.
Qaar ka mid ah falanqeeyayaasha siyaasadda ayaa sheegay in wiilku waa [Wasiirka] ka caansanyahay Aabihiis isagoo ka gaari kara meel fog xudduudaha sida wayn uga dhex jira siyaasiyiinta waqooyiga Hindiya.